विमानस्थल भोलि साँझ ५ बजेसम्मका लागि बन्द — Sanchar Kendra
१जोसमा होस गुमाउने नेपाली सेनाका मेजर बर्खास्त
२भारतमा एकैदिन तीन लाख बढी संक्रमित, यति धेरैको मृत्यु, देशभर त्रास
३पाँच दलीय समन्वय समितिको बैठक बस्दै, यस्तो छ तयारी
४अमेरिकामा ट्रेनअगाडि धक्का दिएर एसियाली महिलाको ह’त्या, आरोपीले भने ‘म भगवान हुँ’, भिडियोसहित
५आज यी स्थानमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना
६देउवा सरकारले गर्यो फेरि जनता रुवाउने यस्तो नयाँ निर्णय
७कोरोना महामारीकाबीच देउवा सरकारले गर्यो जनतालाई राहत मिल्ने यस्तो नयाँ निर्णय
८नेपालमा कोरोना संक्रमण हालसम्मकै उच्च रेकर्ड, ११ हजार ३५२ जनामा पुष्टि
९ओमिक्रोन महामारीका बीच फेरी विद्यालय खोल्न अनुमति, अब के हुन्छ ?
१०चिसोले मधेश प्रदेशको जनजीवन प्रभावित
११एपीएफ क्लबलाई प्रधानमन्त्री कपको उपाधि
१२कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माकाे सपरिवार कोरोना संक्रमित, कसको अवस्था केछ ?
१‘जोसमा होस् गुमाउने’ श्रीमान् श्रीमती जेल चलान
२एकाएक नयाँ दिल्ली किन पुगिन प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा
३ललितपुर पुगेकी हिमानी शाहलाई आपत
४कोरोना संक्रमण भएपछि शरीरमा के हुन्छ ?
५प्रधानमन्त्री मोदी चढेको गाडीमाथि फिल्मी शैलीमा आक्रमण
८को हुन् एमाले अध्यक्ष केपी ओली ? यस्तो भन्छ अमेरिकाको गोप्य रिपोर्ट
विमानस्थल भोलि साँझ ५ बजेसम्मका लागि बन्द
काठमाडौं । बाढी पसेर प्रभावित बनेको विराटनगर विमानस्थल बिहीबार साँझ ५ बजेसम्म बन्द हुने भएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले वायुसेवा प्रदायकहरुलाई विमानस्थल बन्द रहने समय जानकारी गराएको हो ।
सोही अनुसार वायुसेवा कम्पनीले बिहीबारका लागि निर्धारित उडानहरु समेत रद्द गरेका छन् । यसअघि बुधबारका लागि निर्धारित उडानहरुसमेत रद्द गरिएका छन् । यो विमानस्थल नेपालको सबैभन्दा व्यस्त विमानस्थलमध्ये एक मानिन्छ ।
यता, विमानस्थलमा बाढी पस्दा सोही विमानस्थलमा रोकिएका दुई जहाज समेत विराटनगरमै अड्किएका छन् । बुद्ध एयरको एक जहाज र श्री एयरलाइन्सको एक जहाज विराटनगरमा रोकिएका छन् । ती जहाज समेत अब बिहीबार साँझ ५ बजेसम्म रोकिने भएका छन् ।
यस्तै सरकारले बाढीपहिरोमा परी मृत्यु भएका परिवारलाई राहत दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले बाढी पहिरोमा परी मृत्यु भएका परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले परिवारको एक जनामात्रै मृत्यु भएको अवस्थामा प्रतिपरिवार २ लाख रुपैयाँ र एकजना भन्दा धेरैको मृत्यु भएको भए प्रतिव्यक्ति थप १ लाखका दरले राहत दिने निर्णय गरेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बाढीपहिरोमा परी घाइते भएकाहरुको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्नेछ । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले अवरुद्ध सडक, विद्युत् र सञ्चारलाई सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै सरकारले बाढी पहिरोबाट घर भत्केकाहरूको घर निर्माणका लागि ५ लाखसम्म आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ । बैठकको निर्णयअनुसार पहाडमा घर बनाउन ४ लाख, हिमालमा ५ लाख र तराईमा ३ लाख उपलब्ध गराइने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले जानकारी दिए ।
घर निर्माणका लाथि जग्गाको अभाव हुनेका लागि थप ३ लाख पनि उपलब्ध गराइनेछ । ‘बाढीपहिरो प्रभावितको तत्काल खोज, उद्धार, राहतमा ध्यान दिने निर्णय भएको छ । त्यसका साथै पुनर्स्थापना र आवास निर्माणका विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
आवास पुनर्निर्माणको मापदण्ड बमोजिम सरकारले निजी आवास निर्माण गर्छ, आवश्यकताअनुसार सामूहिक आवासको पनि निर्माण गरिनेछ,’ गृहमन्त्री खाँणले भने । उनले बाढीका कारण बालीनालीमा भएको क्षतिको विवरण संकलन गरी त्यसका आधारमा राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिने बताए ।
यस्तै सरकारले अविरल वर्षाका कारण गएको बाढी तथा पहिरोमा परी घर भत्केकाका परिवारलाई तत्काल प्रतिधुरी ५० हजार दिने निर्णय गरेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बुधबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अहिलेसम्म विभिन्न जिल्लामा २० घर भत्केका तथ्यांक प्राप्त भएको छ । यस्तै उद्धार र राहतका लागि राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्ने निर्णय भएको पनि पोखरेलले बताए । यस्तै अन्य कृषि बालीलगायतका क्षतिका सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन गरेर त्यसका आधारमा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भएको छ । त्यसका लागि कृषि मन्त्रालयको संयोजकत्वमा देशभर भएका क्षतिको लगत संकलन गरिनेछ ।
यस्तै प्रधानमन्त्री पनि बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवलोकनमा जाने तय भएको पोखरेलले बताए । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर बाढी पहिरोबाट ५० जनाको मृत्यु भएको छ भने ३९ जना बेपत्ता छन् ।
जोसमा होस गुमाउने नेपाली सेनाका मेजर बर्खास्त
देउवा सरकारले गर्यो फेरि जनता रुवाउने यस्तो नयाँ निर्णय
कोरोना महामारीकाबीच देउवा सरकारले गर्यो जनतालाई राहत मिल्ने यस्तो नयाँ निर्णय
ओमिक्रोन महामारीका बीच फेरी विद्यालय खोल्न अनुमति, अब के हुन्छ ?
नेपालमा भारतीय फिल्मका सुपरस्टारको गाडीमा आगजनी, आयोजकले यसरी दियो धोका
गस्तीमा खटिएको प्रहरी टोलीमाथि आक्रमण
कोटेश्वरमा टिपरको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु, पछाडि बस्ने गम्भीर घाइते